युगसम्बाद साप्ताहिक - पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा
Sunday, 12.15.2019, 05:47am (GMT+5.5) Home Contact
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा
Wednesday, 05.17.2017, 12:15pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । वैशाख ३१ गते तीन प्रदेशका ३४ जिल्लामा निर्वाचन सम्पन्न भयो । यतिबेला मतगणना जारी छ । आम जनताको चासो यसैमा केन्द्रित छ । २० वर्षपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचित संरचना अनुसार भएको निर्वाचनप्रति जनताले अपार साथ दिए । झण्डै ७३ प्रतिशत मत खसेको छ । मुलुक बाहिर रहेकाहरुको संख्या जोड्ने हो भने यो प्रतिशत अहिलेसम्मकै उच्च मान्न सकिन्छ । विदेशमा रहेकाहरुले मतदान गर्न पाएनन् । २०६५ सालयता दशौं लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । मतदान स्थलहरुमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या बढी देखिनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । अर्कोतिर भर्खर बालिग भएका ठूलो संख्याका युवाहरुले मतदानमा सहभागी हुन पाएनन् । जेजति मतदान भयो यसले जनताको चाहना स्पष्ट पारिदिएको छ । तीन प्रदेशमा भएको मतदानले बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचनको पनि संकेत गरेको छ । अब तराईका जनता जेठ ३१ को व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।
पहिलो चरणको निर्वाचन केही छिटफुट बाहेक शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । चुनाव बिथोल्ने घोषणा गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले दुर्गम क्षेत्रमा बिस्फोट गराएर मतदान सामग्री लुटे । कालिकोटमा भीडन्तै भयो । दोलखामा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दलहरुबीचको भीडन्तमा एकजनाको ज्यान गयो । यी बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा निर्वाचन उत्साहजनक रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब आम जनता परिणामको प्रतिक्षामा छन् । निर्वाचनमा यसअघिकै जस्तो परम्परागत प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै टक्कर हुनेछ भने माओवादी केन्द्र यी दुई दलको पछिपछि लागिरहेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्मको स्थितिमा एमाले र कांग्रेस नै अग्रस्थानमा रहने देखिएको छ । माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमाा । निर्वाचनमा परिणाम जसको पक्षमा गए पनि यसले अनेक वहानामा निर्वाचनमा जान नचाहेका शक्तिलाई ठूलो धक्का दिएको छ । असम्भव माग राखेर निर्वाचनमा भाग नलिने हुँकार गर्नेहरुले अब जनमतको परीक्षा लिनैपर्ने बाध्यता आइपरेको । विश्लेषकहरु तीन प्रदेशमा भन्दा तराई मधेशको निर्वाचनमा अरु बढी मतदाताको सहभागिता हुने बताउँछन् । मधेशका मुद्दा अनि संविधान संशोधनको विषयले जनतालाई पटक्कै छोएको छैन भन्ने पहिलो चरणको निर्वाचनले देखाइसकेको हुँदा अब राजनीतिक दलका नेताहरु आआफ्ना एजेण्डा बोकेर हैन जनताको एजेण्डा बोकेर उनीहरुको बीचमा जानुको विकल्प छैन । मधेशवादीहरुले जेजस्ता माग राखेका छन् त्यो माग पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन र त्यो नेपालभित्रबाट उठाइएको माग पनि हैन भन्ने कुरा मधेशकै जनताले बुझिसकेका छन् ।
निर्वाचन राजनीतिक दल र तिनका नेताको हैसियत जाँच्ने उपयुक्त औजार हो । जनमतकै आधारमा नेताले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालका केही राजनीतिक दलहरु विदेशीको इशारामा चलेका हुँदा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिर्णयको अवस्था कायमै छ । सरकारले उनीहरुकै माग पूरा गर्ने र निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले संसदमा संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव दर्ता गरेको छ र यसलाई उनीहरुले स्वागत पनि गरेका छन् । तर त्यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून छ । संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा भाग नलिने उनीहरुको अडानले घाटा उनीहरुलाई नै हुनेछ । मधेशवादी दलहरुको जनमत कति छ भन्ने त दोस्रो संविधानसभामै देखिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागिता भएन भने लगभग बडारिने स्थिति आउँछ ।
सधैं विदेशीको बुई चढेर राजनीति गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो स्थितिमा संविधान संशोधनको नारा छाडेर निर्वाचनमा भाग लिनु नै उनीहरुका लागि नै हितकर छ । नेपाली जनता के चाहन्छन् भन्ने पहिलो चरणको निर्वाचनले देखाइदिएको छ । अब केही मधेशवादी दलहरुलाई बोकेर हिंड्ने विदेशी शक्तिले पनि सोच्नुपर्ने भैसकेको छ । जनमत कमजोर हुँदै जाने र विदेशीका नाराको भरिया मात्र बनिरहने हो भने उनीहरु राष्ट्रिय त के क्षेत्रीय वा प्रान्तीय दल पनि बन्न सक्दैनन् । अब मधेशवादी बोक्ने पृष्ठशक्तिको पछिलागेर हैन जनमत लिएर अघि बढ्दा सबैको भलो हुनेछ ।
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
जनता सधैं नछक्किउन
अरुको इशारामा त पशुले पनि नृत्य गर्छ - यादब देवकोटा
निवृत्त राष्ट्र सेवकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध किन ? - तारा सुवेदी
आज देशको स्थिति र लाटो साथीको कविता - महेश्वर शर्मा
श्रममा विष्टका अविस्मरणीय बीस महिना
सताक्षीधाममा गौमूत्रबाट औषधि उत्पादन सुरु
अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र खानकै लागि कोही पनि मागेर बस्नु नपर्ने
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकूद : आवश्यक पूर्वाधार तयारी अन्तिम चरणमा